छात्रवृत्ति फिर्ता नगर्न तपाईले कतिवटा विषयहरु पार गर्नु पर्छ? | गठन र अध्ययन
माइट निक्यूसा | | छात्रवृत्ति
जब एक छात्र छात्रवृत्ति को लागी आवेदन गर्छ, उसले सामान्यतया यस कलको आधारहरु ध्यानपूर्वक पढ्छ। यस तरिकाले, यसले प्रस्तुत गर्दछ तपाइँको अनुरोधको प्रकृया गर्नका लागि प्रदान गरिएको टर्म भित्र प्रासंगिक दस्तावेज। एक पटक सबै प्रक्रियाहरू सकिए पछि, आवेदकहरूले रिजोलुसनको प्रकाशनको लागि कुर्नु पर्छ।
छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न मात्र लाभ प्रदान गर्दैन, किनकि यो वित्तीय सहायताले शिक्षण शुल्क खर्च पूरा गर्न सहयोग प्रदान गर्दछ। छात्रवृत्ति संख्या असीम छैन, त्यसैले सहायता प्राप्त गर्न पनि एक जिम्मेवारी हो।
1 गैर-अनुपालन को मामला मा छात्रवृत्ति पैसा फिर्ता
2 MEC छात्रवृत्ति फिर्ता नगर्न तपाईले कतिवटा विषयहरु पार गर्नु पर्छ?
गैर-अनुपालन को मामला मा छात्रवृत्ति पैसा फिर्ता
अध्ययन गर्न प्रतिबद्धता प्रत्येक कोर्सको शैक्षिक उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न महत्वपूर्ण हुन्छ। उद्देश्यहरू जुन प्रत्येक विषयको प्रस in्गमा फ्रेम गरिन्छ। छात्रवृत्तिको लागि आवेदन दिन विद्यार्थीहरूले आफैलाई सोध्ने प्रश्न छ। छात्रवृत्ति फिर्ता नगर्न तपाईले कतिवटा विषयहरु पार गर्नु पर्छ? यो यस्तो प्रश्न हो जुन व्यक्तिगत तरीकाले परामर्श लिनु पर्छ, किनभने हरेक प्रकारको छात्रवृत्ति फरक हुन्छ र बिभिन्न सर्तहरू हुन्छन्। यस तरीकाले, उही सबै बिन्दुको बारेमा विस्तृत जानकारी पाउन कलको आधारहरू पढ्नुहोस्। र, बदलेमा, तपाईं यस सम्बन्धमा कुनै प्रश्नहरू समाधान गर्न सम्मेलन निकायलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।
यो प्रश्न फरक तरिकाले प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। छात्रवृत्ति कायम गर्न क्रिड्सको एक स्थापित संख्या पास गर्न अनिवार्य छ। यो औंल्याउनु पर्छ कि विद्यार्थी अर्को पाठ्यक्रम मा फेरि सहायता अनुरोध गर्दछ। यद्यपि यो सहायता प्रदान गरिएको छ कि तपाइँ तपाइँको आफ्नै शैक्षिक परिणामहरु मा निर्भर गर्दछ।
छात्रवृत्ति को उद्देश्य एक विशेष उद्देश्य को लागी बनाईएको हो। अनुदान संख्या सीमित छ, र आवेदन संख्या बढी हुन सक्छ, त्यहाँ एक प्रक्रिया छ कि ती अनुदान को लाभार्थीहरू को हुनेछ निर्दिष्ट गर्दछ। तिनीहरू ती हुन् जो अड्डाहरूमा सेट गरिएका सर्तहरूको पालना गर्छन्। यद्यपि यदि पाठ्यक्रमको अवधिमा विद्यार्थीले यी केही सर्तहरूको स्थापना भएको कुरालाई तोड्यो भने ऊ अनुपालनमा पर्नेछ। र, यस तथ्यले पनि छात्रवृत्ति भने को सम्बन्ध मा परिणाम हो।
MEC छात्रवृत्ति फिर्ता नगर्न तपाईले कतिवटा विषयहरु पार गर्नु पर्छ?
किन सम्मेलन इकाईले आवेदकलाई छात्रवृत्ति फिर्ता गर्न आवाश्यक हुन सक्छ भन्ने कारण यो छ कि सहायता जुन उद्देश्यको लागि प्रयोग गरिएको थिएन त्यसको लागि प्रयोग गरिएको थिएन। यो त्यस्तो चीज हो जुन विभिन्न परिदृश्यहरू र परिस्थितिहरूमा देखा पर्न सक्छ। को MEC छात्रवृत्ति तिनीहरूलाई शिक्षा र व्यावसायिक प्रशिक्षण मन्त्रालयले अनुमोदन गरेको छ। यी अनुदानहरूको मुख्य उद्देश्य शिक्षाको लागि समर्थनलाई प्रोत्साहित गर्नु हो। यस छात्रवृत्तिको लाभार्थीले प्राप्त रकम फिर्ता गर्नुपर्नेछ, उदाहरणका लागि, उसले विश्वविद्यालय केन्द्रमा नामांकन रद्द गर्न अघि बढायो भने। यो निर्णयले उनको शैक्षिक जीवन परियोजना मा एक महत्वपूर्ण मोड मा चिन्ह लगाईएको छ।
तर यो पनि हुन सक्छ कि प्रयास र अध्ययन समयको बावजुद, विद्यार्थी सहायता फिर्ता नगर्नको लागि आवश्यक विषयहरूको संख्या पास गर्न असमर्थ छ। विद्यार्थीले उनीहरूले भर्ना गरेको of० प्रतिशत क्रेडिटहरू पास गरेको हुनुपर्दछ। यो डाटा %०% मा तोकिन्छ जब यो विज्ञान क्यारियर को लागी आउँछ।
जब अन्तिम डिग्री परियोजना सञ्चालन गर्न सहायता प्राप्त भएको छ र यो तोकिएको मितिमा प्रस्तुत गरिएको छैन भने, विद्यार्थीले प्राप्त पैसा फिर्ता गर्न अघि बढ्नु पर्छ। रकम फिर्ता पनि गर्नुपर्नेछ जब भने कि सहायताले प्राप्त गरेको अर्को छात्रवृत्तिसँग असंगत छ.
तसर्थ, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईले आवेदन कल प्रक्रियाको लागि छात्रवृत्तिको लागि बिभिन्न कलमा उपलब्ध जानकारीमा ध्यान दिनुहोस्। तर यो पनि महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईले छात्रवृत्ति स्वीकार्नुमा समावेश शर्तहरू पढ्नुपर्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: गठन र अध्ययन » विश्वविद्यालय » छात्रवृत्ति » छात्रवृत्ति फिर्ता नगर्न तपाईले कतिवटा विषयहरू पार गर्नु पर्छ?
गर्मीमा पढ्नको लागि न्यूरोडिकेसनमा ation पुस्तकहरू